Dhowr qodob oo iiga baxay hadalkii Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas? – Goobjoog News
Dhowr qodob oo iiga baxay hadalkii Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas?
Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa shantii bishii June xiriirka u jaray dalka Qatar, iyaga oo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, islamarkaana xulufo ay la tahay Dowladda Iran. Dowladda Qatar ayaa beenisay eedeymahan, oo ay ku sheegtay kuwa aan sal lahayn.
Wadamada caalamka gaar ahaana dunida Muslimka ayaa ku kala aragti duwanaaday arrintan, Soomaaliya waxaa ay kamid ahayd dalalkii go’aanka dhex dhexaadnimada ka noqday khilaafka u dhaxeeya Isbaheysiga Sacuudiga iyo Qatar, waxaana Dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay aad uga xuntahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex bilowda dalalka Carabta.
War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri “Soomaaliya waxey ugu baaqeysaa wadamada walaalaha ah ee khilaafku ka dhex taaganyahay inay khilaafkoodu ku xaliyaan wada hadal loo maro Jaamacadda Carabta iyo ururka Iskaashiga Islamka.”
Dad badan ayaa wixii xiligaasi ka dambeeyay iswaydiinayay waxa uu noqon doono go’aanka Maamul-goboleedyada Soomaaliya, waxaana isa soo tarayay shakiga ah in Maamul-goboleedyada Soomaaliya ay dhici karto inay la saftaan Dowladda Sacuudiga taasoo saameyn ku yeelaneysa siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibada ee Dowladda Soomaaliya.
Go’aankii Maamulka Puntland.
16-kii bishaan Maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxaa uu ku sheegay inay taageereen isbaheysiga ay hoggaaminayaan Dowladdaha Sacuudiga iyo Imaaraddka kuwaasoo ay ku sheegtay Puntland inay si buuxdo ugu taageereyso muranka kala dhxeeyo dalka Qatar. Puntland waxaa ay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu baaqday inay dib u fiiriso go’aankii ay markii hore ka qaadatay arrinta khaliijka ee dhexdhexaadinimada ahaa.
Dhowr qodob oo iiga baxay Hadalkii Gaas.
Hadalka madaxweynaha oo aan ka dhageystay Idaacadda VOA Soomaali, waxuu uu iila muuqday sida qof wax diidan waxna qarinaya, sida aan ka dhadhamiyey hadalka Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa jira kala aragti duwanaansho Dowladda Federaalka ah iyo Maamulka Puntland oo ku aadan arrinta khilaafka khaliijka taasoo soo shaac baxday kaidb markii ay isku fahmi waayeen masuulyiinta Federaalka iyo kuwa Puntland.
1- Gaas waxuu sheegay in Puntland ka soo horjeedo mowqifka Dowladda Federaalka , taasoo ka dhigan khilaaf.
2- Hadalkiisa waxaa ka muuqata in puntland mowqifkeeda dowladda hor dhigtay laakiin dowladda ku gacan seyrtay.
3- Sida uu madaxweynaha ka dhawaajiyay Puntland waxay taageero dhinacyo badan leh ka heshaa dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, halka Qadar iyo Turkiga oo xulufo ah loo xagliyo dhanka caasimadda iyo dowladda dhexe. Sidaas darteed mowqifka Dowladda ee dhex-dhexaadnimada ah waxuu ku yeeshay saameyn xun.
4- Waxaa muuqata in dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka cadaadis xoogan oo sharci darro ah saarayaan umadda soomaaliyeed, gaar ahaan Maamul-goboleedyada. Waxaa daliil u ah booqashada Gaas iyo Siilaanyo ay ku tageen xilligan.
Nuxurka warka Puntland:
Puntland waxaa saaran cadaadis dhanka dhaqaalaha amniga iyo weliba mashaariic ay fulinayeen labadan dal, waana arinka u nugleeyay cadaadiska. Gaas carrabka ayuu si toos ah ugu dhuftay “anaga Qadar waxba nagama soo gaaro” waa dood macquul ah oo la fahmi karo. Waxaa looga gudbi karaa in dowladda dhexe Gobbolada gaarsiiso hantida iyo mashaariicda Dowladda, islamaarkana dadka Soomaaliyeed ay si siman u wada helaan adeega Dowladnimo.
Soomaalida ha ogaadaan in dalalka carabta, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka inaysan wax dan ah ka lahayn in Soomaaliya sii jirto!!!!
FIIRO GAAR AH: Qoraalkan kama turjumayo aragtida Goobjoog ee wuxuu u gaar yahay qoraha ku saxiixan.
Bvvomz qzgqzm Real cialis online prices of cialis
Urfvbg jjknsn walmart pharmacy Yfegl
Kaydka Goobjoog Select Month August 2020 (100) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
ShiftingWale packers and movers provide reliable and hassle-...
This is a really helpful post, very...
Thank you so much for this wonderful Post. This is an awesom...